Dacwadda cayaaryahan Oscar Pistorius - BBC Somali - Warar
Dacwadda cayaaryahan Oscar Pistorius
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 19 Febraayo, 2013, 10:11 GMT 13:11 SGA
Oscar oo ka baxaya saldhigga booliis ee uu ku xiran yahay
Orodyahanka reer Koonfur Afrika Oscar Pistorius, oo lagu soo dacweeyay inuu dilay gabar ay saaxiibo ahaayeen Reeva Steenkamp, ayaa sheegay in markii uu rasaasta ridayay uu u maleeyay qof guriga u soo dhacay iyadana uu u heystay inay weli sariirta jiiftay.
Mr Pistorius ayaa ku ooyay maxkamadda markii laga sheegay halkaasi faahfaahin ku saabsan dilka.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Mr Pistorius uu riday dhawr xabbadood oo uu ku riday musqusha qubeyska ee gurigiisa.
Waxa uu qof qaraabo ah u sheegay inuu u maleeyay in qof u soo dhacay gurigooda uu jiray.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegaya in dilka uu ahaa mid la qorsheeyay, laakiin qareennada cayaaryahanka ayaa maxkamadda u sheegay in aanay jirin wax caddeyn ah oo arrintaasi muujineysa.
Qoyska Reeva Steenkamp ayaa iyaguna magaalada Port Elizabeth waxa ay ku sameysanayaan tacsi gaar ah oo ay ku xasuusanayaan gabadhooda.
Afrika Gabdho ka soo badbaaday Boko Haram